QORMAATA SADEE! – Beekan Guluma Erena
QORMAATA SADEE!	Beekan Guluma Erena
Education, General Category April 12, 2016April 12, 2016BARSIISAAFI HUBANNOO	6 Comments
86SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Q o r m a a t a S a d e e..!
Hiwi ~ Elona
Seenaa Griik keessatti nama beekkumsaan gar malee beekkamu kan Soqraaxas jedhamu tokkotu ture. Guyyaa tokko namichi tokko Soqraaxas bira dhufee;
Jaal Soqraaxas ~ Waan hiriyaa keetii waanan dhagaye beeytaa? Jedhee gaafate
Mee dhaabbadhu! Waa’ee hiriyaa kootii waan tokko natti himuu keetin dura waan natti himuuf deemtu kana ilaalchise Qormaata sadeen tokko si qoruun barbaada jedheen. Qormaanni kun gaafilee sadi kan qabu yoo ta’u ‘ Qormaata Sadee’ jedhamuun beekkamu jedheen:)
Qormaata sadee?? Jedhe namtichi!
Eeyyen jedhe Soqraaxas. Osoo waa’ee hiriyaa kiyyaa waanuma tokkoo natti hin himin dura yeroo fudhattee waan natti himuuf deemtu sana kallattii sadihiin sirritti calaluu si barbaachisa. Saniif qormaata sadee jedhama jedheen..
Qormaanni 1ffaan Dhugaa Qabeessummaadha
Dubbiin ati natti himuuf deemtu kuni guutumaan guututti dhugaadhaa? Jedhee gaafate Soqraaxas
Lakki, anis namarraayin dhagaye malee guutumaan guututti sirri ta’uu isaa hin beeku jedhe namtichi.
Tolegaa amma Qormaata Lammataatti haa dabarru
 Qormaanni 2ffaa Gaarummaa Dubbiichaati
Wanti ati natti himuuf deemtu suni waan gaaridhaa? Jedheen Soqraaxas
Lakki faallaa isaati jedhe namtichi
Tole dubbiichi durumayyuu dhugaaf dhara ta’uu isaa hin beektu, kan natti himuuf deemtus gaarummaa hiriyaa koo osoo hin ta’in badummaa isaati; mee haa ta’u qormaata isa sadaffaatti haa dabarru;
 Qormaanni 3ffaan Faayda Qabeessummaadha;
Wanti ati natti himuuf deemtu kuni anaaf faaydaa ni qabaa? jedhee gaafate Sooqraaxas
Lakki faaydaa homaatuu siif hin qabu!
Tolegaa ” erga wanti natti himuuf deemtu dhugaa ta’uu isaa hin hubatin, kan gaarummaa hiriyaa kootii hin ta’in, dabalataan immoo anaafis faaydaa qabeessa kan hin taane yoo ta’e natti himuun kee maalif barbaachise?” Jedhee namticha oduu oo’ituu qabatee bira dhufe sana Barumsa guddaa barsiisee ofirraa gaggeesse! Durumayyuu Hamiin Beekaa namaa bira yoo geessu akkanatti salphatti!
Hiriyoota koo, yeroon ammaa yeroo namni oduu tokko nama kan biraatif dabarsuudhaaf itti ariifatu. Kanaafuu waan haasa’uuf adeemnu sana haa xiinxallinuu. Oso maqaa nama tokkoo gara hin taanen hin balleessin dhaabbannee of haa gaafannuu. Waan akka dhuunfaatti akka nurra hin qaqqabne barbaannu tokko namoota biroorras akka hin qaqqabne haa hawwinuu. Waan tokko nama isa kan biraatti dabarsuu keenyaan duras qabxiilee sadeen kana sirrtti haa xiinxallinuu✍
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa86SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← KAAYYOO KARAA DHEERAA
6 thoughts on “QORMAATA SADEE!”	Gamtaa ZawudeeApril 12, 2016 at 5:19 pmPermalink	Dhugaadha Beekan dubbittiin” Osoo hin hubatin arrabaa gubachuu” sana taati waan ta’eef dura hubachuun dansa.
Reply	seenaa TemamApril 12, 2016 at 5:36 pmPermalink	Gorsa baay’ee gaariidha Galatoomi!!! yeroo hundayyu,Eessatiyyu akkuma of if miidhamu hin barbadden namooni Biro’s akkasuma dubbii hundee hin qabnen/hololla sobattin nama farajjun Rabbi biras ta’e saba keetinis jaalatama miti. BEEKAN GULUMMA xiinxalliifi yaadni kee kun immoo dhugaa yeroo amma rakkoo gudda Sana irra jirtudha qomoon keenya sirritti of ilalluu qaba.diini yeroo amma kana shiira isa galmaan gahachu akka meeshati dubbii akkannati faayadama jira soban maaqa xuuresa hojji nama sana kan hin tane akka namni sun hojjeteti soban dubbacha ekkellen akkana ekkellen immo akkasi jedha saba fira waljibbisisa jira sirriti of egaachun barbachisadha namni oduu akkasi asifi achi offanis irraa ofquusachu qabu GALATOOMA!!!!!!!
Reply	Bal'isaa Dassee Dabalaa SanyiiApril 13, 2016 at 12:11 pmPermalink	Hayyee Beekan koo Gorsikee kallattumaan Onneekoo dhoosee keessa quphate. Har’aan booda “Qormaata Sadee” hojjirra akkan oolchu abdiin qaba. Rabbiin Umurii dheeraa siif haa kennu.
Reply	fufa abdiiApril 13, 2016 at 6:13 pmPermalink	Baay’ee namatti tolaa qalamni kee haa mirgiisuu! !!
Reply	Abdisa TatoApril 14, 2016 at 10:45 pmPermalink	thanks
Reply	Bulo DebesaJune 14, 2016 at 2:56 pmPermalink	Baga hayyuu keenya taate !
Ammayyuu ijji hamtuun si ilaaltu haa jaamtu !!